Njem nlegharị anya Seychelles ewepụtala Mmemme Ọkachamara Ọrụ Ọhụrụ
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Seychelles » Njem nlegharị anya Seychelles ewepụtala Mmemme Ọkachamara Ọrụ Ọhụrụ
Foto sitere n'ikike nke Seychelles Dept. of Tourism
Ọ bụ n'ememme a na-ekusa ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na ọtụtụ ndị na-ege ntị si Hilton 'Labriz Gastro' Lounge na Bel Ombre, ka Minista Seychelles na-ahụ maka mba ofesi na njem nlegharị anya, Mr Sylvestre Radegonde, wepụtara mmemme Excellence Service 'Lospitalite - Lafyerte Sesel. ' na Fraịde, Jenụwarị 28, 2022.
Dabere na ogidi atọ bụ isi, Sensitization na Awareness, Education and Training and Recognition and Award, mmemme a bu n'obi iweta mgbanwe n'omume na echiche ndị mmadụ gbasara ọrụ ndị ahịa n'ozuzu. na Seychelles a na-atụkwa anya na ọ ga-abụ mmalite nke ọrụ mba na-adịte aka.
N'okwu ya na-esochi ihe ngosi na isi nke Lospitalite - Lafyerte Sesel na ikpughe akara ngosi mgbasa ozi ahụ, Minista Radegonde kọwara na mkpọsa a bụ ịgba ume na ịzụlite ụkpụrụ nke ịdị mma ọrụ, mpako na ịnabata ndị ọbịa anyị na ịmata ndị nọ na njem nlegharị anya. ụlọ ọrụ ndị kacha mma.
“Ile ọbịa bụ ihe onye Seychellois ọ bụla na-amụta n'ikpere nne ya, anyị nwekwara ike ikwu n'atụghị egwu na ọ na-esote ịdị ọcha na nsọpụrụ Chineke n'omenala anyị. Onye ọ bụla ọbịa na-arịtu na obodo a bụ ọbịa anyị, na-eleta anyị ebe a n'ụlọ anyị. Anyị kwesịrị ịnya isi n'ịbụ ndị ọbịa na ịnye ọrụ kacha mma anyị nwere ike ime ka onye ọ bụla n'ime ha nwee mmetụta nke ọma na ebe ọ bụla aka na njem ahụ n'oge niile anyị na-anabata ha ebe a na Seychelles, ebe obibi anyị. Ebe obibi anyị na nkwado nke ụlọ ọrụ anyị dabere na ya, "onye ozi ahụ kwuru.
Ihe oru ngo a, nke dabara n'okpuru ikike nke Ngalaba Nleba Nleta Nleba anya & Development Division ma na-ebuga ya site na ngalaba mmepe nke Human Resource Development n'ime nkewa a; nọ na nkwado kemgbe nkeji nke atọ nke 2021 nke otu kọmitii nhazi ọkwa dị elu nke onye isi ode akwụkwọ Sherin Francis na-edu.
PS Francis gosipụtara ekele ya nye ndị niile zara nke ọma na oku mgbasa ozi dị iche iche site n'igosi echiche ha iji mee ka mmemme ahụ gaa nke ọma. N'ịkọwapụta isi mgbasa ozi na mkpa ogidi atọ na-akwado mgbasa ozi ahụ o kwuru,
"Lospitalite - Lafyerte Sesel na-ekpuchi ihe niile anyị chọrọ ịkọwa; ọchịchọ anyị maka ụlọ ọrụ ọrụ anyị; na-ekpo ọkụ, enyi na enyi, na-enyere aka, na-emesapụ aka… ma ọ metụtara onye ọ bụla na-enye ọrụ. Ọ bụ okwu anaghị eji ya n'oge a. Ọ na-ekwu n'ezie. Anyị maara na anyị anọghị ebe ahụ mana nke a bụ ebe anyị na-achọsi ike ịnọ. Anyị na-anya isi n'àgwàetiti anyị, ọdịdị okike ya na ịma mma ya, anyị na-eji ndị anyị na-anya isi; enyi na enyi, ịhụnanya, ọtụtụ agbụrụ, iche iche, na anyị maara na anyị nwere ya n'ime anyị na-ele ọbịa. Naanị anyị kwesịrị iji mpako gosi ya. Nganga ije ozi na inwe obi ike zuru oke iji wepụ mpako anyị n'akụkụ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-egbochi anyị ịga njem ahụ ọzọ," PS Francis kwuru.
E meziri abụ isiokwu mkpọsa ahụ nke Aaron Jean tụgharịrị ya na Channel Azemia. 'Tourizm i nou dipen', nke onye omenka ama ama Seychellois Jean-Marc Volcy dere bụ raara onwe ya nye n'ịkọwa mkpa ngalaba njem nlegharị anya dị ka onye na-azụ anyị.
N'okwu mmechi ya Director General for Destination Planning and Development, Paul Lebon wepụtara votu ekele nye ndị niile megoro mmemme ahụ.
Ọzọ na: Tourism | Seychelles | Education
Ndị njem ụgbọ elu na-eme njem n'etiti USA na Europe 1,003% Tourism|
DeSantis World kwadoro Disney World na Florida Education|
Njem nlegharị anya Malaysia ga-enweta ahịa Middle Eastern na ATM 2022 Tourism|
Minista Jamaica na-agba ndị bi na mba ọzọ ume itinye ego ugbu a na njem nlegharị anya mpaghara
Mmadụ atọ bụbu ndị isi ala Afrịka na-edu ọgbakọ nchekwa mba Rwanda ọhụrụ
Onye minista njem nlegharị anya nke Jamaica ga-eduga Global Mega Marketing…
Ahịa Bamboo Straws 2022: Ọchịchọ na-abawanye maka...
Ihe kpatara ụmụ amaala US kwesịrị isi na Russia pụọ
Ndị SAUDIA na American Express na-emekọrịta ihe maka kilomita ọhụrụ ...
Ụgbọ elu ụgbọ elu, Drone Delivery - ha nwetara ego ugbu a
Boeing kpọrọ ụlọ ọrụ Northern Virginia aha ọhụrụ zuru ụwa ọnụ…